डिम्याट खाता के हो ? कसरी सञ्चालन हुन्छ ? - Tamang Online
धितोपत्र बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक सेयर निष्काशनमा लगानी गर्न डिम्याट खाता अनिवार्य गरेको छ । यद्यपि, कतिपयलाई डिम्याट खाता के हो ? कसरी खोल्ने यो खाता ? जस्ता सामान्य सामान्य जानकारी पनि नहुन सक्छ । यसै आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै बैंकिङ यो सामग्री तयार पारेको छ ।
कुनै कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको छ, तर सेयरधनीले सो कम्पनीको सेयर डीपी खातामा जम्मा गरेको छैन भने पहिला त्यस्ता सेयरधनीले डीपी खाता खोलेको कम्पनीलाई सोको जानकारी दिनुपर्दछ । त्यसपछि हकप्रद सेयरको फारम भर्दा डिपोजिटरी पार्टि्सिपेन्ट र बेनिफिसियल ओनर आईडी नम्बर उल्लेख गरेमा सेयर सोझै लगानीकर्ताको खातामा जम्मा हुन्छ ।
« प्रधानमन्त्रीले सेयर किन्नको लागि दुईवटा डिम्याट खाता खोले, कति किन्लान् ? (Previous News)
(Next News) काभ्रेमा प्रहरी र बिप्लवका कार्यकर्ता बीच गोलि हानहान »